Vaovao - Euroshop 2020 & Couleur Lighting
Euroshop 2020 & Jiro Couleur
Ity i Couleur Lighting dia nandray anjara tamin'ny EuroShop, ny fanontana ny hetsika zava-dehibe indrindra amin'ny sehatry ny varotra 2020 dia nanararaotra nanehoan'i Couleur Lighting ny fivoarany sy ny fanavaozana azy. Tianay ny misaotra an'ireo rehetra nitsidika ny trano heva misy anay ao Euroshop ao Düsseldorf. Ny fametrahana tarehy amin'ny anarana sy fampidirana Couleur Lighing fanavaozana vaovao navoaka tamin'ity taona ity dia tena nahafaly! Couleur Lighting an'ny ekipa dia nampiseho ny fahaizany matihanina hampahafantatra ny vokatray amin'ny mpanjifanay.
Nanasa ny mpanjifanay izahay fa niara-niasa nandritra ny taona maro mba hitsidika ny trano heva, ary mpanjifa vaovao koa mitsidika ny trano heva misy anay.
Couleur Lighting ho toy ny manufacuturer matihanina amin'ny LED Strip Lighting ho an'ny dokam-barotra Light box mihoatra ny 10 taona, misy karazana LED Strip Light an-jatony.
Misy jiro LED Strip am-polony ao amin'ny Euroshop, izay neken'ny mpanjifa miaraka.
Nahazo vokatra tsara ihany koa ny fampirantianay. Misarika mpanjifa marobe ny trano heva anay, satria avo lenta ny vokatra sy ny fahalalantsika matihanina.
Betsaka ny anton-javatra tsy azo antoka, Mbola nandefa vokatra vaovao-RGB Dynamic Curtain LED Strip izahay, izay nahasarika mpanjifa marobe ary nanampy loko tsara tarehy tao amin'ny trano fivarotanay.
Ny kalitaon'ny jiro Product-backlight & Edge-lit jiro dia nahazo fiderana malalaka avy amin'ny
Ankoatr'izay, izahay dia nandefa sehatra ho an'ny fampirantiana vaovao-RGB Curtain LED Strip ary nahazo valiny tsara avy amin'ireo mpitsidika EuroShop izy.
RGB Curtain LED Strip dia taranaka vaovao mampiseho LED izay manambatra ny sary vita amin'ny lamba vita amin'ny sary mihetsika sy ny sary mihetsika izay mahasarika ny sain'ny besinimaro amin'ny famelomana ireo sary vita pirinty ho velona.
Azo ampiasaina amin'ny boaty maivana io, tena revolisiona ho an'ny fifandraisana eo amin'ny fivarotana izay hanome traikefa fiantsenana mavitrika sy tsy hay hadinoina ho an'ny mpanjifanao.
Izy io koa dia ampiasaina amin'ny haingon-trano, Bar, Hotel ary toeram-pivarotana. Hisarika olona iray maso io ary hahasoa anao.
RGB Curtain LED Strip dia mety ho araka ny fangatahanao programmable, ary hanova loko isan-karazany tianao.
Ny RGB Curtain LED Strip dia misy tombony vitsivitsy: mora ny fametrahana, azo havaozina haingana ny sary, misy ny famaranana marobe ary haingana ny fandefasana azy io hampihenana ny vidin'ny fitaterana.
Ny Euroshop dia dia tsy hay hadinoina, afaka miandry isika hisaraka amin'ny Euroshop2023 manaraka, tongasoa eto an-toerana.
Fotoana fandefasana: Feb-16-2020